မြန်မာ့သတင်း | Burmese Hearts
Category Archives: မြန်မာ့သတင်း
တ်လ ၁၀ရက်တွင် လုံခြုံရေးရဲများက သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို လက်ပံတန်းမြို့တွင် အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးစဉ် သွားရောက်သတင်းယူခဲ့သည့် သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို မတ်လ ၁၃ရက်၊ ညနေ ၃နာရီတွင် အာဏာပိုင်များက သာယာဝတီထောင်မှ တရားသေ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သတင်းထောက်နှစ်ဦးမှာ Reporter ဂျာနယ်မှ ကိုဖြိုးအောင်မြင့်နှင့် မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်မှ ကိုဥာဏ်လင်းထွန်းတို့ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာအသိအမှတ်ပြု ထုတ်ပေးထားသည့် ကတ်ဒ်ပြားများ ချိတ်ဆွဲထားသည့် ကြားကပင် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ပြန်လွတ်လာသည့် Reporter ဂျာနယ်မှ ကိုဖြိုးအောင်မြင့်က “ဖမ်းတဲ့အချိန်ကနေ ကားပေါ် တင်တဲ့အထိ အနည်းဆုံး ၈ ချက်၊ ၉ချက်လောက် အရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဗျာ။ သာယာဝတီထောင်မှာတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ရိုက်နှက်တာ မရှိဘူး’’ ဟု ပြောသည်။
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် လုံထိန်းများက သတင်းထောက်များကိုပါ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးရန် ပြုမူလာသဖြင့် သွားရောက်သတင်းယူသည့်
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းသမား အယောက် ၄၀ကျော်မှာ ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။
မတ်လ ၁၂ ရက်က လက်ပံတန်းအဓိကရုဏ်းအတွင်း ဖမ်းဆီးခံထားသူ ၁၂၇ ဦးမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၇ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုပြင့် မတ်လ ၁၁ရက်ကလည်း ဖမ်းဆီးခံရသည့် သံဃာ ၁၀ ပါးကိုလည်း ပြန်လွှတ်ခဲ့သည်။
This entry was posted in Uncategorized on March 14, 2015 by BurmeseHearts.	မော်လမြိုင် ကျောက်တန်း စက်ရုံစု မြေဈေးများ ၁၀ ဆနီးပါး မြင့်တက်
မော်လမြိုင် ကျောက်တန်း စက်ရုံစု စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပြီး မကြာမီ စက်ရုံတည်ဆောက် မည့် မြေဈေးများ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း စက်ရုံစုလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
မော်လမြိုင် ကျောက်တန်း စက်ရုံစု စီမံကိန်းကို မြေ ၂၅၄ ဧကတွင် အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး ယခုထိ လုပ်ငန်းရှင် ၄၀ က မြေဧကပေါင်း ၂၃၀ ကျော် ဝယ်ယူထားပြီး လမ်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စက်ရုံ တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီး စက်ရုံလည်ပတ်မှုကို ယခု ၂၀၁၅ နှစ်လယ်ပိုင်း စတင်နိုင်ရန် စီစဉ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
စက်ရုံစုနယ်မြေအတွင်း အစားအစာ ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ၊ သားရေစက်ရုံ၊ ရေသန့်စက်ရုံ၊ သစ်အချောထည်လုပ်ငန်း၊ သွပ်ပြားနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ ပါဝင်မည်ဟု ကော်မတီက ဆိုသည်။
စက်ရုံစုစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်မဖော်ရသေးသည့် လစ်လပ်မြေဧက ၁၀ မှာ စီမံကိန်း စတင်ချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ် ပါက ၁၀ ဆကျော် မြင့်တက်လာခြင်းဟု အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှရှိန်က ဆိုသည်။
“စီမံကိန်းမြေ ၂၅၀ ကျော်မှာ ကျန်တာဆိုလို့ ၁၀ ဧကကျော်ပဲရှိတာ။ လယ်သမားက ဈေးခေါ်နေတော့ ဘယ် လုပ်ငန်းရှင်မှ မဝယ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ စီမံကိန်း စတင်ချိန်မှာ တစ်ဧကကို ကျပ် ၂၅ သိန်းနဲ့ စဖွင့်ခဲ့တာ။ အခုဆိုရင် လယ်သမားက ကျပ်သိန်း ၂၀၀ လောက်ရမှ ရောင်းမယ်ပြောနေတယ်’’ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
စက်မှုဇုန်နယ်မြေအတွင်း ဝယ်ယူထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များမှာ စက်ရုံတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများ အလျင်အမြန် အကောင်အထည် ဖော်နေသကဲ့သို့ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီကလည်း လမ်း၊ လျှပ်စစ်မီးနှင့် အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံများ အလျင်အမြန်ပြီးစီးရန် ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ မြေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယင်းကော်မတီက ပြောသည်။
ဦးလှရှိန်က “လယ်သမားတောင်းတဲ့ ဈေးက ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျပ်သိန်း ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀ ကနေ အခုနောက်ဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၀၀ အထိဖြစ်နေတော့ ဒီလက်ကျန်မြေက စီမံကိန်းထဲမှာ ကွက်ကျန်နေပြီ’’ ဟု ဆိုသည်။
This entry was posted in Uncategorized on March 14, 2015 by BurmeseHearts.	နိုင်ငံတော်က ချေးယူထားသော ကြွေးမြီများကြောင့် တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ငါးသိန်းခန့်နှုန်းဖြင့် ကြွေးတင်နေ
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးလျှင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကြွေးမြီပေါင်း တစ်ဦးလျှင် ငါးသိန်းနီးပါးခန့်တင်နေသည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မင်းလှမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်တိုးက ပြောသည်။
ဦးမောင်တိုးက မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးရေ ၅၁ သန်းကျော်တွင် ယခင်က ကြွေးမြီ စုစုပေါင်း ကျပ်ဘီလီယံ ၂၀၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ဂျီဒီပီ၏ ၃၀ ဒဿမ ဖြင့် လူတစ်ဦးချင်းလျှင် ၃၈၈ ၉၅၈ ကျပ်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်ဘီလီယံ ၅၂၀၅ ဖြင့် ဂျီဒီပီ၏ ၇ ဒဿမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကာ လူတစ်ဦးချင်းလျှင် ၁၀၁ ၂၂၆ ကျပ် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကြွေးမြီမှာ ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း ၂၅ ၂၀၅ ဖြစ်ပြီး ဂျီဒီပီ၏ ၃၇ ဒဿမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လူတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၄၉၀ ၁၈၄ ဖြစ်သည်ဟု ဦးမောင်တိုးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်ပကြွေးမြီ ၉၁၈၅ ဘီလီယံကျပ်၊ ဂျီဒီပီ၏ ၁၃ ဒဿမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကာ လူတစ်ဦးချင်းလျှင် ၁၇၈ ၆၂၉ ကျပ်၊ပြည်တွင်းကြွေးမြီ ၁၀ ၈၁၅ ဘီလီယံကျပ်၊ ဂျီဒီပီ ၁၆ ဒဿမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ လူတစ်ဦးလျှင် ၂၁၀ ၃၂၉ ကျပ် ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းကြွေးမြီ ကျပ်ဘီလီယံ ၂၀ ၀၀၀၊ ဂျီဒီပီ ၃၀ ဒဿမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ လူတစ်ဦးချင်းလျှင် ကျပ် ၃၈၈ ၉၅၈ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေက ၂၀၁၄ ခု၊ စက်တင်ဘာလတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ များပြားလာခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်ပြင်ပချေးငွေများတိုးလာခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏ကြွှေးမြီသည် ရှိနေသင့်သည့် အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်သွားနိုင်ပါသည်ဟု ဆန်းစစ်ထားကြောင်း ဦးမောင်တိုးက ကိုးကား၍ ပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်ပြင်ပ ငွေချေးခြင်းများကို လျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်ဟုလည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ဆန်းစစ်ထားသည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ သမ၀ါယမ ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တရုတ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်မှ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ချေးယူမည့်အနက် သန်း ၃၀၀ ချေးယူထားခြင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ယွမ်ဘီလီယံ ၃၀ အနက် မကြာသေးခင်က ယွမ် ၂၄၆ သန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် အတိုးနှုန်း ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ချေးယူခြင်းကို ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်အပါအ၀င် တိုင်းရင်သားကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်ကွက်ကြသော်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ၏မဲဖြင့် ချေးငွေကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်။
This entry was posted in Uncategorized on March 13, 2015 by BurmeseHearts.	ဖမ်းခံထားရသောကျောင်းသားများလွှတ်ပေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဒဗယ်လျူဘုရှ့်တောင်းဆို
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရန် လက်ပံတန်းတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသော ကျောင်းသားများကို ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဒဗယ်လျူဘုရှ့်က စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
Bush Institute’s Liberty and Leadership Forum တွင်ပါဝင်ခဲ့သူ မဖြိုးဖြိုးအောင် အပါအ၀င် ဖမ်းဆီးခံထားရသော သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန် သမ္မတဟောင်းဘုရ်ှက တောင်းဆိုထားသည်။
ပညာရေးသည် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး တိုးတက်မှုအတွက် အလွန်တရာအရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မတ်လ ၁၂ ရက်က သာယာဝတီထောင်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော ကျောင်းသား ၁၇ ဦး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
This entry was posted in Uncategorized on March 13, 2015 by BurmeseHearts.	ဦးဝီရသူက ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွင်းမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်
Comments	Shareအမျိုးဘာသာ စောင့်ရှောက်ရေး ဆရာတော် ဦးဝီရသူက လက်ပံတောင်းမှ ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွင်းမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြီး “ကျောင်းသား သပိတ်ဖြိုခွင်းခံရမှုကို အကြောင်းပြု၍ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက် ဖြစ်အောင် ဥပဒေမဲ့တောင်းဆိုမှုများ မပြုလုပ်ရန် အလေးအနက် သတိပေးလိုက်သည်” ဟု ၎င်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
အမျိုးဘာသာ စောင့်ရှောက်ရေး ဆရာတော် ဦးဝီရသူ၊ အာဆီယံလူငယ်ဖိုရမ်၊ ရခိုင့်တပ်မတော် (AA)၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (WLB) တို့က ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို အကြောင်းပြု ၍ အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းရေးကို ရှေးရှုသော ကြိုးကိုင်သူများကို ဖော်ထုတ်အရေးယူရန် တိုက်တွန်းသည် ဟုလည်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
တောင်းဆိုရာတွင် ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ပြည်သူများအပေါ်စွဲဆိုထားသော ပုဒ်မများ ပြန်ဖျက်သိမ်းပြီး လွှတ်ပေးရန်နှင့် လက်နက်မပါဘဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများအပေါ် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု မပြုလုပ်ရန်တို့ကို တောင်းဆိုထားသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်သည့် ရခိုင်တပ်မတော်ကလည်း ကန့်ကွက်ထုတ်ပြန်ထားကာ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖမ်းဆီးထားသော ကျောင်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန်နှင့် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကို တာဝန်ယူရန် တောင်းဆိုထားသည်။ ယင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ထိုဖြစ်စဉ်သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့်သွေဖီနေသည် ဟုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။
This entry was posted in Uncategorized on March 13, 2015 by BurmeseHearts.	စည်ပင်ရိပ်သာတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားခွင့် နေပြည်တော်စည်ပင် ကန့်သတ်
Comments	Shareသမ္မတကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်နေသော နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတွင် နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီက စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှုများ ပိတ်ပင်တားဆီးနေသည်ဟု လွှတ်တော်အမတ်များက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် မဟာမိတ်ပါတီဖြစ်သော စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ နှစ်ခုမှလွဲ၍ ကျန်ပါတီ ၁၇ ခုမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တည်းခိုနေထိုင်လျက်ရှိသော နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာတွင် တည်းခိုသူများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာရာ၌ နိုင်ငံရေးပါတီ အသီးသီးတို့ကို နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ပိတ်ပင်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ဟု ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာက ကြေညာထားသော စည်းကမ်းချက်တွင် နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များတွင် လာရောက်တည်းခိုစေ ၊ တည်းခိုသူများထံ လာရောက်တည်းခိုသူများက ဖြစ်စေ ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ မပြုလုပ်ရဟု ပါရှိသည်။
ယင်းစည်းကမ်းချက်များကြောင့် တည်းခိုလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၇ ခုမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၃၀ ဦးခန့်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုင်ဆိုင်သော ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များတွင်သာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ အစည်းအဝေးများ ဆောင်ရွက်နေရကြောင်း ဦးမင်းသူက ဆိုသည်။
၎င်းက နိုင်ငံရေး ပါတီ တစ်ခုသည် နိုင်ငံရေးစကားကို ပြောမှသာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ လွှတ်တော်အမတ်များ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုတင်ပြခွင့်၊ ညှိနှိုင်းခွင့်ရှိမှသာ ယခုသွားနေသည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။
This entry was posted in Uncategorized on March 13, 2015 by BurmeseHearts.	အာဏာရှင် အကျင့်မပျောက်သည့် အစိုးရဟု အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်
Comments	Shareလက်ပံတန်း ကျောင်းသားပိတ်ကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းပြီးနောက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရကို ဓမ္မစာပေများ ရေးသားနေသည့် အရှင်ဆန္ဒာဓိက,ကလည်း ရင်ထဲက မပါသည့် မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျား အသုံးအနှုန်း မသုံးနှုန်းသင့်တော့ကြောင်း မိန့်ကြားလိုက်သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တွင် မတ်လ ၁၂ ရက်က ကျင်းပသည့် လက်ပံတန်း ကျောင်းသားသပိတ် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရမှု ရှုတ်ချပွဲသို့ ရွှေပါရမီတောရ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာတွင် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် အစိုးရတစ်ရပ်သည် အာဏာရှင် အမူအကျင့် မပျောက်သည်ကို လက်ပံတန်း အကြမ်းဖက်မှုက သက်သေ ပြလိုက်ခြင်းဟုလည်း အရှင်ဆန္ဒာဓိက, က ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ “ဘုန်းကြီးလူထွက်ဟာ ဘုန်းကြီး အမူအကျင့် မပျောက်သလို အာဏာရှင် လူထွက်ဟာလည်း အာဏာရှင် အမူအကျင့် မပျောက်ဘူး ဆိုတာကို လက်ပံတန်း အကြမ်းဖက်မှုက ထင်ရှားစွာ သက်သေပြလိုက်ပါပြီ” ဟု သဝဏ်လွှာတွင်ပါရှိသည်။
လစဉ် ရေဒီယို မိန့်ခွန်းများတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစချီပြောဆိုလေ့ရှိသည့် “မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျာ” ဟူသည့် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားသည် အပေါ် ယံဟန်ပြသာဖြစ်ပြီး ရင်ထဲက မပါသည့် လေသံဖြင့် မပြောဆိုသင့်ကြောင်း သဝဏ်လွှာတွင် ပါရှိသည်။
“မိဘ ပြည်သူများ ခင်ဗျာ ဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားကို ရင်ထဲက မပါတဲ့လေသံနဲ့ အပေါ်ယံဟန်ပြ မပြောဆိုသင့်သလို သားသမီးကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတို့ရေ ဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို မိဘကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာ နှလုံးသားနဲ့ ကရုဏာသံပြည့်ဝစွာ နွေးနွေးထွေးထွေး ပြောဆိုနိုင်ဖို့ကိုလည်း လုံးဝ ဝန်မလေးသင့်ပါဘူး” ဟု အရှင်ဆန္ဒာဓိက,က ဆိုသည်။
မတ်လ ၅ ရက် ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခမ်းမရှေ့တွင် ကျောင်းသားသပိတ်ဖေါ်ဆောင်မှုကို ထောက်ခံဆန္ဒပြသူများအား လက်ပတ်နီ အရပ်သားများ၊ စွမ်းအားရှင်များက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုများကို ရည်ညွှန်းလျက် အဆိုပါ လုပ်ရပ်များသည် အာဏာရှင် လူထွက်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဟုလည်း ဆရာတော်က ဆိုသည်။
မတ်လ ၁၀ ရက် လက်ပံတန်းတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား သပိတ်ဖြိုခွင်းမှုတွင် ကျောင်းသားများနှင့် အရပ်သား ၁၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း “အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖြေရှင်းကြပါ” ဟုလည်း အရှင်ဆန္ဒာဓိက,က တိုက်တွန်းထားသည်။
“အာဏာရှင် လူထွက်တွေရဲ့ သရုပ်သကန်ကို အမှန်အတိုင်း ထုတ်ဖေါ်ဝန်ခံလိုက်တာပါပဲ” ဟု ဆိုကာ “နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲအားလုံးနီးပါးနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအဲအားလုံးနီးပါးဟာ အာဏာရှင် လက်ထက်က အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်လို့ အာဏာရှင် လူထွက်တွေပဲ” ဟုလည်း ဆရာတော်က ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး မင်းကောင်းမင်းမြတ် ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ အမြန်ဆုံး တွေ့ကြုံဆုံဆည်းခွင့် ရကြပါစေဟုလည်း ဆရာတော်၏ သဝဏ်လွှာ နိဂုန်းတွင် ဆုမွန်တောင်းထားသည်။
This entry was posted in Uncategorized on March 13, 2015 by BurmeseHearts.	Post navigation
POPULAR	လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးသလိုကြုံရတဲ့အမျိုးသား ဆေးရုံတက်ပြီး အမျိုးသားအင်္ဂါ ခွဲစိတ်ရ	ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ရထားတံခါးနှင့် ညပ်မိပြီး ရထားအောက်ရောက်သွားသည့် အမျိုးသမီး	ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လိင်တံအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့	ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ကျော်ဘ၏ သားအမှု တရားလိုပြ သက်သေနှစ်ဦးအား စစ်ဆေး	ရှော့ပင်းမောလ်ထဲ ပြသထားသော လျှပ်စစ်ကားပေါ် တက်မောင်းတဲ့ငါးနှစ်သားက တွန်းလှည်းထဲက ကလေးကိုတိုက်မိ	ငိုနေတဲ့ကလေးတိတ်အောင် လည်ပင်းကို လွှစက်နဲ့ဖြတ်ခဲ့သူ	IS အဖွဲ့လက်အောက်ရှိ သွေးဆာသည့်လူအုပ်ကြီးက IS အဖွဲ့သတ်ခဲ့တာတွေကို ရုပ်ရှင်သဖွယ်ကြည့်ကြ	အီရတ်မှာ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သော ဆယ်ကျော်သက် သြဇီနိုင်ငံသား	ဗွီဒီယိုဇတ်ကား ဖြန့်ချီပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အင်တာနက်မှ အခပေးကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်	IS အား ဘိုကိုဟားရမ်အဖွဲ့များ သစ္စာခံ	အီးမေးလ်ကနေတဆင့် တင်သည့် အကြောင်းအရာအသစ်များ ရရှိလိုပါက Subscribe လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Archives	Select Month
March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 MOST POPULAR	လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးသလိုကြုံရတဲ့အမျိုးသား ဆေးရုံတက်ပြီး အမျိုးသားအင်္ဂါ ခွဲစိတ်ရ	ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ရထားတံခါးနှင့် ညပ်မိပြီး ရထားအောက်ရောက်သွားသည့် အမျိုးသမီး	ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လိင်တံအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့	ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ကျော်ဘ၏ သားအမှု တရားလိုပြ သက်သေနှစ်ဦးအား စစ်ဆေး	ရှော့ပင်းမောလ်ထဲ ပြသထားသော လျှပ်စစ်ကားပေါ် တက်မောင်းတဲ့ငါးနှစ်သားက တွန်းလှည်းထဲက ကလေးကိုတိုက်မိ	ငိုနေတဲ့ကလေးတိတ်အောင် လည်ပင်းကို လွှစက်နဲ့ဖြတ်ခဲ့သူ	IS အဖွဲ့လက်အောက်ရှိ သွေးဆာသည့်လူအုပ်ကြီးက IS အဖွဲ့သတ်ခဲ့တာတွေကို ရုပ်ရှင်သဖွယ်ကြည့်ကြ	အီရတ်မှာ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သော ဆယ်ကျော်သက် သြဇီနိုင်ငံသား	ဗွီဒီယိုဇတ်ကား ဖြန့်ချီပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အင်တာနက်မှ အခပေးကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်	IS အား ဘိုကိုဟားရမ်အဖွဲ့များ သစ္စာခံ	RECENT NEWS	ခဲနေတဲ့ရေအိုင်ထဲ ကျွံကျသွားခဲ့သော သားကိုလိုက်ကယ်တဲ့ အမေရော သားပါသေဆုံး
Burmese Hearts	Proudly powered by WordPress Theme: Twenty Twelve.